Sony elektaroniga ayaa daahfuraya ku darista cusub ee G Master Series Taxanaha Lens-Frame Full-Frame oo leh Fudud iyo Iswaafajin 35mm F1.4 G Master ™ | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » content abuurkii » Sony elektaroniga ayaa daahfuraya kudarsigii ugu dambeeyay ee G Master Series Taxanaha Lens-Full-Frame Lensweight iyo Compact 35mm F1.4 G Master ™
Sony Electronics Inc. ayaa maanta shaacisay FE 35mm F1.4 GM (model SEL35F14GM) - ku darista ugu cusub ee lagu amaanay taxanaheeda muraayadaha muraayadaha buuxa ee 'Master' oo keenaya tayada muuqaalka heerka koowaad iyo bokeh qurux badan oo qaab dhismeed iyo miisaan fudud leh. Marka lagu laabo jirka kamarad E-Mount, muraayadaha ayaa bixiya SonyAwoodaha warshadaha hogaaminaya ee AF ​​(autofocus) - waxay kufiicanyihiin adeegsiyo kaladuwan sida duubista muuqaalka muuqaalka, sawirrada iyo sawir qaadista waddooyinka, labada muuqaal iyo fiidiyowba.
"At Sony, ujeedkeenu waa inaan dunida ka buuxino shucuur iyada oo loo marayo awooda hal-abuurka iyo tikniyoolajiyadda sidaa darteed waxaan qaabeynay FE 35mm F1.4 GM si ay si fiican u qabato daqiiqadaha u baahan in la badbaadiyo weligood, ”ayuu yidhi Neal Manowitz, madaxweyne ku xigeenka Imaging Products and Solutions America at Sony Elektaroniga "Xallinta wanaagsan iyo tiknoolajiyada xoogga saareysa caqliga, dhammaantoodna qaab yar oo fudud, tani waa muraayadaha lama huraanka ah ee aan hoos u dhigin tayada muuqaalka."
Xallinta Wanaagsan ee Lens Compact
SonyNaqshadeynta indhaha ee sare iyo tikniyoolajiyadda waxsoosaarka waxay keeneysaa xallin aan caadi ahayn, qurux badan, iyo waxqabad diiradda saaraya muraayadaha is haysta oo si raaxo leh ugu habboon calaacasha gacantaada, culeyskiisuna yahay 18.5 wiqiyadood (524 garaam) oo cabirkeedu yahay 3 inji dia. x 3 ⅞ inji (76 mm dia. x 96 mm) oo leh dhexroor miiraha ah Φ67mm. FE 35mm F1.4 GM waxay soo bandhigtay tikniyoolajiyad casri ah oo casri ah oo soo bandhigeysa kala duwanaansho la yaab leh iyo xallin heer sare ah. Laba walxaha XA (xagjirnimada daran) si wax ku ool ah u ilaaliya xallinta heer sare ee aagga muuqaalka. Waad ku mahadsantahay walxaha galaaska 'ED' iyo waxyaabaha kale ee dib u habeynta indhaha, FE-da cusub 35mm F1.4 GM wuxuu sifiican ugu shaqeeyaa nalalka adag adoo si wax ku ool ah u xakameynaya uurjiifka iyo geedka buluuga ah ee natiijooyinka neefta leh.
Bokeh qurux badan
FE 35mm F1.4 GM waxay soo bandhigeysaa furitaanka wareegga wareegga iyada oo ay ugu mahadcelineyso dhismaheeda 11-daab - heer naadir ah oo tayo leh oo loogu talagalay muraayadaha isku dhafan. Xakamaynta aberration-ka goobeed ee naqshadeynta iyo marxaladaha wax soo saar labadaba waxay gacan ka geystaan ​​bokeh qurux badan - oo ah astaan ​​saxeexan SonySafka muraayadaha 'G Master'.
Laba cunsur oo cusub oo XA ah ayaa gacan ka geysta isku soo dhowaanshaha cajiibka ah ee leh bokeh asal jilicsan, kareem leh. Isku darka furitaanka ugu badan ee F1.4 iyo dabacsanaanta lagu dooranayo masaafada ugu fiican ee toogashada (masaafada ugu hooseysa ee kaliya 10.6 inji (27cm) oo leh weyneynta ugu badan ee 0.23x ee qaabka autofocus) waxay u oggolaaneysaa xakamaynta ugu dambeysa iyo bokeh la yaab leh marka la tooganayo labada isqabta iyo video.
Focus Focus ah oo loogu talagalay Muuqaalka La Kordhiyay
Laba ka mid ah Sony'XD (firfircoonida daran) Linear Motors waxay bixisaa waxtarka riixitaanka sare ee loo baahan yahay saxda ah ee AF ​​(autofocus) iyo raadraaca - taasoo keentay xalka ugu fiican masaafad kasta. Algorithms-ka xakamaynta casriga ah, oo si gaar ah loogu sameeyay XD Linear Motors, hagaajinta jawaab celinta iyo saxnaanta iyadoo la yareynayo gariirka iyo buuqa si dhaqso leh, habsami leh oo aamusnaan u leh waxqabadka AF.
Heer sare oo diiradda ayaa sidoo kale lagu gaari karaa marka wax lagu tooganayo heer sare.
Jawaab toosan MF waxay hubisaa in giraanta diirada ay ka jawaabeyso xakamaynta khiyaanada marka gacanta la saarayo waana ku habboon tahay saameynta diirada abuurka marka la duubayo fiidiyowga. Wareegga giraanta diirada ayaa si toos ah ugu tarjumeysa isbeddel u dhigma diiradda, markaa xakamaynta ayaa dareemeysa deg deg iyo sax ah.
Xakamaynta Xirfadaha Iyo Kalsoonida
FE 35mm F1.4 GM waxay bixisaa xakamayn buuxda oo xirfadlayaal ah oo ay kujiraan giraan furfuran oo leh istaagis guji oo la beddeli karo, badhanka haynta diirada la beddeli karo iyo beddelka habka foojignaanta ee dhammaantood taageeraya hawlgal hufan, hufan. Badhanka haynta diirada ayaa loo qoondeyn karaa dhowr hawlood oo kale iyada oo loo marayo menu-ka kamaradda, iyada oo si toos ah loogu helayo shaqooyinka muhiimka u ah sawir qaadayaasha iyo sawir qaadayaasha.
Markii lagu rakibay kamarad APS-C ama Super 35 ah, fekerka iswada leh ee fudud 35mm F1.4 GM waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay muraayad caadi ah oo u dhiganta 52.5mm xagal buuxa oo u dhigma aragtida, taas oo ka dhigaysa iyada xulashada ugu fiican ee abuurista fiidiyowyada. Faa'iidooyinka fiidiyowga ee dheeraadka ah waxaa ka mid ah furitaanka la riixi karo, AF toosan oo deg deg ah iyo tilmaam toosan oo diirada lagu saarayo
FE 35mm F1.4 GM wuxuu leeyahay boodh iyo qoyaan u adkaysta[i] Naqshadeynta iyo walxaha horreeya ee fluorine-ka ee dib u celiya biyaha, saliidda iyo sunta kale.
FE cusub 35mm F1.4 GM waxaa la heli doonaa bisha Febraayo waxaana lagu iibin doonaa qiyaastii $ 1,399.99 USD iyo $ 1,899.99 CAD. Waxaa lagu iibin doonaa noocyo kala duwan oo ah SonyGanacsatada idman ee Waqooyiga Ameerika oo dhan.
Sheekooyin gaar ah iyo waxyaabo cusub oo xiiso leh oo lagu sawiray muraayadaha cusub iyo SonyAlaabada kale ee imaging laga heli karo waxaa laga heli karaa www.alphauniverse.com, Goob loo sameeyay inay waxbarto oo ay dhiirrigeliso dhammaan taageerayaasha iyo macaamiisha Sony brand - Nooca Alpha.
Waxyaabaha cusub ayaa sidoo kale si toos ah loogu dhejin doonaa barta Sony Sawirka Sawirka. Macluumaadka badeecada oo faahfaahsan, fadlan booqo:
(Mareykanka) - FE 35mm F1.4 GM
Fiidiyow wax soo saar ah oo ku saabsan FE-da cusub 35mm F1.4 GM waa la daawan karaa HALKAN.
About Sony Iwm.
Sony Elektaroniga waa hoosaad ka mid ah Sony Shirkadda Mareykanka iyo xulufadeeda Sony Corporation (Japan), waa mid ka mid ah shirkadaha madadaalada ugu dhameystiran adduunka, oo leh faylalka ay ka kooban yihiin elektarooniga, muusigga, sawirrada dhaqdhaqaaqa, moobilka, ciyaaraha, aaladaha iyo adeegyada maaliyadeed. Xarunteeduna tahay San Diego, California, Sony Elektaroniga wuxuu hormuud u yahay korantada macaamiisha iyo suuqyada xirfadleyda ah. Hawlgallada waxaa ka mid ah cilmi baarista iyo horumarinta, injineernimada, iibka, suuqgeynta, qeybinta iyo adeegga macaamiisha. Sony Elektirooniggu wuxuu abuuraa alaabooyin ikhtiraac iyo dhiirigelin u leh jiilalka, sida abaalmarinta ku guuleysatay Kaamirooyinka Lens Beddelka iyo alaabada maqalka ee xallinta sare. Sony sidoo kale waa soo saaraha hormuudka u ah xalalka aakhiro-dhamaadka ee ka imanaya 4K baahinta xirfadeed iyo qalabka A / V ilaa warshadaha hogaaminaya 4K iyo 8K HD Ultra TV-yada. Booqasho www.sony.com/news Wixii macluumaad dheeraad ah.
[i] Lama hubo inuu noqon doono 100% busta iyo biyuhuba.
Previous: NDR-da Jarmalka wuxuu isku daraa StudioDirector-ka CGI ee Studio-ga cusub ee Hamburg
Next: Aviteng wuxuu ku biirayaa Cinegy AŞ Business Partners